Hiran State - News: HS:-Gudoomiyahii gobolka Hiiraan C/fatax Hasan Afrax oo..
HS:-Gudoomiyahii gobolka Hiiraan C/fatax Hasan Afrax oo..
HS:- Warar lagu kalsoonaan karo oo naga soo gaaraya magaalada B/weyne ayaa sheegaya in gudoomiyahii hore ee Hiiraan ee waqtigiisa dhamaaday C/fatax Hasan Afrax iyo dhamaan madaxdii kale ay go,aan ku gareen in ay si sharaf leh ku wareejin doonaan masuuliyadii ay ku magacaawnaayeen lana shaqeyn doonaan maamulka cusub oo loo bdinayo inuu madax u noqon doono ama loo magacaabi doono 99% Cabdi Faarax Laqanyo oo ah shaqsiga siweyn loo hadal hayey maalmahii ugu danbeeyey.
Mr Laqanyo oo ah shaqsi nadiif ah oo aan ku lug laheyn dagaaladii sokeeye ayey sheegeen masuuliyiinta maamulkii hore in uu istaahilo in lala shaqeeyo oo waqti la siiyo ay ku shaqeeyaan isaga iyo hadba masuuliyiinta kale. hadii ay maamulkii hore si sharaf leh iska;a wareejiyaan xilka waxey ka dhigan tahay iney noqonayaan gudoomiye C/fitaax iyo masuuliyiinta kale maamulkii ugu horeeyey ee bulshada Hiiraan u fura baal cusub kuwaasi oo noqonaya mudo 22 sano ah kadib maamulkii ugu horeeyey ee si sharaf leh xilka ku wareejiya.
Warku waxuu intaas ku darayaa in gudoomiye C/fataax uu doonayo inuu siyaasada ku sii jiro mustaqbalka waxii qaladaad ah amaba ay ku xambaartay dhalinyaro nimo waqtigii uu joogayna uu halkaas ku egeeynayo hada kadib si uu ula jaan qaado isbedelada ka curtay wadankeenii hooyo.
Magaalada B/weyne ayaa laga yaabaa marka lagu dhawaaqo maamulka cusub in ay hal mar soo gaaraan wafti ay la socdaan labada gudoomiye. dad badan ayaa saadaalinayey maalmahan in aysan dowlada Soomaaliya bulshada Hiiraan kala kulmi doonin caqabado badan tanaasulka bilaawga ah ee ay la yimaadeen amaba wararka horu dhaca ah ee naga soo gaaraya Hiiraan ee sheegaya in gudoomiye C/fataax iyo maamulkii uu horboodayey ay xilka si sharaf leh ku wareejinayaan ayaa ah war xaqiiqda u dhaw oo leysku haleyn karo.
Isku soo duuboo hadii xilkaan loo magacaabo Mr Laqanyo waxey ka dhigan tahay in walwalkii Hiiraan ka heystay xukumadan cusub uu meesha ka baxayo reer Hiiraana isku diyaarinayaan doorasho xor ah si loogu gudbo maamul goboleed iyadoo waxkasta loo marayo wadada ugu macquulsan iyo rabitaanka shacabka.
Hadii maalmahan soo socda lagu dhawaaqo maamulka cusub tani waxey dhabar jab xoogan ku tahay urur goboleedka IGAD ee ku mashquulsanaa dhismaha Jubaland. sidoo kale waxaa meesha ka baxaya tuhunkii ahaa in madaweynaha Soomaaliya uu reer Hiiraan si gaar ha ugu hiilinayo oo uu yiri reer Hiiraan tashada oo maamul goboleed dhista warkaas oo hada noqonaya mid aysan waxbo ka jirin maadaama maamul kumeel gaar ah oo ay soo qaabeysay dowlada Soomaaliya ay bulshada Hiiraan yeelanayaan.
La soco wararkeena danbe iyo hadba meesha ay mareyso dhismaha maamulada cusub ee loo sameynayo gobolada dalka ee ay hormuudka ka tahay dowlada Soomaaliya.
· admin on February 23 2013 12:43:54 · 0 Comments · 1522 Reads ·
14,600,080 unique visits